Wararka Maanta: Khamiis, Jan 31, 2013-UNHCR oo sheegtay in Qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira Xeryaha Qoxootiga Kenya ay doonayaan inay ku laabtaan dalkooda
UNHCR ayaa sheegtay in Qoxootiga Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku sugan inay muujinayaan sida ay u doonayaan in dib loogu celiyo gudaha dalkooda, gaar ahaan gobollada Koonfurta oo ku jirto Muqdisho.
Mas’uuliyiinta sare ee UNHCR ayaa ku sheegay warbixin ay Arbacdii lasoo dhaafay soo saareen ayay ku sheegtay in qoysas tiradoodu dhan tahay 18 oo ku nool xeryaha Dhadhaab ay doonayaan in dib loogu celiyo dalkooda, iyagoo sidoo kalena xaqiijiyay sida ay diyaarka ugu yihiin inay wareejiyaan warqadihii macluumaadka oo ay ku qaadan jireen raashiinka qalalanaa ee ay hay’addu siin jirtay.
”Tani waa astaan muujinaysa rabitaanka ay Qoxootiga Soomaalida ah u qabaan in dib loogu celiyo dalkooda,” sidaasi waxaa lagu sheegay warbixinta xaaladda qoysaska waydiistay hay’adda UNHCR ee dalbaday in dib loogu celiyo dalkooda Soomaaliya.
Xeryaha Qoxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxaa ku nool in ka badan nus malyuun qoxooti Soomaaliyeed ah, kuwaasoo ka cararay colaadaha iyo abaaraha dalka ka taagnaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay. Balse waxaa muuqatay inay dooranayaan hadda inay dib ugu laabtaan dalkooda.
Hay’adaha gargaarka ayaa ku sheegay dib u laabashada qoxootigan inay ku timid ammaanka deegaannada Koonfurta Soomaaliya oo soo hagaagaya iyo iyagoo qoxootiga ay doonayaan inay beertaan dhul beereedkoodii oo ay ku waayeen abaarihii xoogganaa ee dalka ku dhuftay sannadihii lasoo dhaafay.
Go’aanka ay qoxootig Soomaalida ku dalbanayaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo ayaa wuxuu imaanayaa xilli ay dowladda Kenya amar ku siisay qoxootiga ku nool magaalooyinka waaweyn inay dib ugu laabtaan xeryaha Qoxootiga, taasoo ay kasoo horjeesteen hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha.